Turkida iyo Carabta; shalay iyo maanta | Doodwadaag waa Danwadaag.
Dagaalkii koowaad ee adduunka, qaar badan oo Carabta ka mid ah waxa ay ka hor yimaadeen Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Waxa ay ku dhawaaqeen kacaan ka dhan ahaa Cusmaaniyiinta, waxa ayna garab siiyeen isbahaysigii ka soo horjeeday Cusmaaniyiinta ee ay Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushku hogaaminayeen. Dagaalkaas waxaa lagu jabiyay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Ciidamada Faransiiska iyo Ingiriisku waxa ay gudaha u galeen magaalada Istanbuul bartamihii bishii Novembar 1918kii.
Waxaa arrinkaas ka dhashay dhaqdhaqaaq gobanimo doon ahaa. Gobanimo doonkaas waxaa ku biiray Dhaqdhaqaaqii la magac baxay ’Wadaniyiinta Turkiya’ ee uu hogaaminayay Ataturk. Ugu dambayn, heshiiskii Lozan (Treaty of Lausanne) ee 1923kii ayay awoodihii xoogga ku galay Caasimadda Cusmaaniyiinta iyo Ataturk ku heshiiyeen in la qaybiyo dhaxalkii Boqortooyada Cusmaaniyiinta, Turkiyana laga dhigo Jamhuuriyad ’madaxbannaan’ balse ku tiirsan reer galbeedka, kana fogaata Carabta.
Ataturk iyo raggii kale ee ku aragtida ahaa ee talada dalka uga danbeeyay, ayaga oo doonaya in ay kala fogeeyaan Turkida iyo sooyaalkooda, kana faa’idaysanaya dareenka dadka Turkida ah ee ku aaddanaa Carabta oo markaas aad u kacsanaa maadaama ay wax ka burburiyeen boqortooyadoodii; waxa ay la dagaallameen wax kasta oo muuqaal Carbeed lahaa. Waxa ay reebeen in afka Carabiga ah lagu cibaadaysto. Waxaa la qariyay taariikhdii iyo kaalintii hoggaamineed ee Cusmaaniyiintu ku lahaayeen gobolka. Waxaa la billaabay in iskuullada lagu dhigo taariikh ka sheekaynaysa sida ay Carabtu ’dad liita u yihiin.’
Maalintii shalay ahayd ayuu Erdogan isaga oo la hadlaya xildhibaannada xisbigiisa, kadib markii uu ka soo laabtay booqashadii Khaliijka waxa uu u sheegay in la iska illoobo beenta ah in Carabta oo dhan ay dad xun yihiin. Waxa uu tibaaxay in maadaama aan la dhihi karin waxkasta oo ay argagaxisadu sameeyaan muslimiinta ayaa ka masuul ah, sidaas si la mid ahna aan gefaf ku xusan taariikhda oo ka dhacay qaar Carabta ka mid ah aan loo tiirin karin Carab oo dhan. Waxa uu ku dhiirri geliyay xildhibaannada in loo baahan yahay iskaashi dhex mara muslimiinta ‘maadaama xaalad adag lagu jiro.’
Hadalka Erdogan uu u jeediyay xildhibaannada xisbigiisa waxa uu farriin toos ah u dirayaa shacabka Turkiya, taas oo ah in ay hadda u furan tahay hanashada hoggaanka gobolka. Sidoo kale, waxa uu hadalka Erdogan farriin dadban u dirayaa Carabta, taas oo macnaheedu yahay in Turkidu ogyihiin oo weli xusuustaan kaalintii ay Carabtu ku lahaayeen burburintii Boqortooyadii awoodda lahayd ee xarunteedu ahayd Istanbuul.
Turkidu, maanta waxa ay doonayaan in ay soo ceshadaan kaalintii hoggaamineed ee ay ku lahaayeen gobolka, halka qaar isla Carabtii ka mid ahna ay weli ka shaqaynayaan sidii ay dib ugu celin lahaayeen Turkida halkii ay shalay wax ka geeyeen ee ahayd Jamhuuriyad ka laalaadday meel u dhaxaysay bariga iyo galbeedka.
Qalinka: Abdirashid Alim